Hay’adaha ammaanka Puntland oo soo bandhigay Miino la dhigay…
Ciidamada ammaanka Dowlad Goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan Gobolka Bari ayaa sheegay in ay kahor tageen Qarax nuuca Miinada dhulka lagu aaso ah ay kasoo saareen Magaalada Boosaaso.
Howlgalkaan waxaa la fuliyay Ciidamada Nabadsugidda iyo saraakiisha Miino barista oo ku guuleystay in ay kahor tagaan Qaraxa oo ay ku tilmaameen in loogu talagalay in dad lagu dilo sida ay hadalka u dhigeen.
G/Sare Xuseen Cali Maxamuud Taliyaha qaybta Booliiska Gobolka Bari oo Warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu bogaadinayo cid waliba oo gacan ka geysatay soo saarista Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog-fog laga hago.
“Ciidamada Ammaanka waxa ay ku guuleysteen fashilinta qarax Argagixisadu ku aaseen Magaalada Boosaaso oo laga daba-tagay, waxaa la wadaa baaritaanno la xiriira cidda ka dambeysay ee Miina dhigtay, Hay’adaha ammaanka oo gudanaya Waajibaadkooda waxa ay shacabka ka badbaadiyeen Qaraxaan” ayuu yiri Taliye Xuseen.
Magaalada Boosaso ee xarunta Gobolka Bari maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday howlgal loogu talgalay wax ka qabashada falalka amni darro, Qaraxyada iyo dilalka ay ka geystaan Al-Shabaab iyo Daacish.